Global Voices teny Malagasy » Bosnia Sy Herzegovina : Takian’ireo Mpanao Hetsipanoherana Ny Rariny Ho An’ireo Fahafatesana Roa Tsy voavaha · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Jona 2018 6:43 GMT 1	 · Mpanoratra Tijana Cvjetićanin Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Bosnia Herzegovina, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Izy ity dia lahatsoratra iray  nadika malalaka sy navaozin'ilay mpanoratra azy ihany ary navoaka tao amin'ny NewsMavens.
Ny fikambanan'ireo Sosialy Demokraty tsy miankina sy ny mpitarika azy Milorad Dodik  no nitondra ny Repoblikan'i Srpska tamin'ny fomba jadona nandritra ny folo taona mahery, tamin'ny fametrahana ny paikady mahazatra hamahana ny olan'ny fifandirana. Ny fihetsiky ry zareo tamin'ilay hetsi-panoherana dia halefa mandrakariva amin'ny haino aman-jery mpanohana ny governemanta, izay nanambara fa nahodina ho fitaovana ara-politika ny antony nanaovana ilay hetsi-panoherana. Amin'ny ankapobeny, ireo fanambarana ireo dia ampiarahana amin'ny filazàna fa ” sampam-pitsikilovana sy mpisehatra iraisam-pirenena” no miezaka manongana an'i Dodik sy ny governemantany amin'ny fampiasàna ireo mpanao hetsi-panoherana ho toy ny saribakoly tsy dia ahiahiana loatra.
Mieli-patrana ao anaty sy ivelan'ny aterineto sy ny teny faneva hoe ” Ny rariny ho an'i David “. Nahatarika mpikambana maherin'ny 323.000 avy amin'ny faritra rehetra ilay vondrona ao amin'ny Facebook mitovy anarana aminy ( “Pravda za Davida”  amin'ny teny Bosniaka/ Kroaty/Serba). Amin'ireo herinandro ho avy, dia hiparitaka any amin'ireo faritra ivelan'i Banja Luka ilay hotakotaka.
Nanomboka nikarakara hetsika ho fanohanana an'i Dragičević ireo vondrona maro ao an-toerana sy any amin'ny faritra any amin'ny tanàna bosniaka maro sy ireo any am-pielezana. Ohatra, ireo mpikambana 1.300 amin'ny “Pravda za Davida – Kozarska Dubica”  dia avy any Dubica , tanàna misy mponina 23.000. Ny hetsika tamin'ny aterineto no niteraka ny fahafenoan'ny toerana, tahaka ilay iray tamin'ny 8 May tany Modriča , toerana malalaka fivoriana mitovy habe amin'ny an'i Dubica, araka izay hita amin'ity lahatsary manaraka ity. Mijoro mangina ireo mpanao fihetsiketsehana ary manao ilay fihesika ahafantarana ny rain'i Dragičević amin'ny fananganana ny totohondry havanana.
Mitaky ny rariny ho an'ny tranga famonoana tanora iray, i Dženan Memić, avy any Sarajevo, renivohitr'i BIH ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana. Nolazaina tany am-boalohany fa lozam-pifamoivoizana no nahafaty azy tamin'ny febroary 2016 ka nitarika ireo fianakaviany ho amin'ny ady mahatrotraka mba hamoahana ny marina. Hetsi-panoherana  maro ho fanohanana ny fianakavian'i Memić no natao tao amin'ny kianja any Sarajevo nandritra ireo roa taona lasa. Natao tamin'ny 16 May  lasa teo ny farany ary nampiarahana tamin'ny an'ny rain'i David Dagičević, teo ambany teny faneva ” Ny rariny ho an'i Dženan sy i David “.
Anatiin'ny taom-pifidianana iray any Bosnia, avo be ny fanamby satria nampangaina ho manao “fitaovana politika” ireo mpanao fihetsiketsehana. Nofintinin'ilay mpanao gazety, Tanja Topić, izay manoratra ho an'ny gazety mpiseho isan-kerinandro any Belgrade Vreme  tamin'ny 17 May, ny maha-zava-dehibe ilay hetsi-panoherana :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/19/120149/
 Fihaonambe POINT momba ny andraikitry ny politika sy ny teknolojia vaovao : https://point.zastone.ba/
 lahatsoratra iray: https://newsmavens.com/news/pattern-recognition/1495/attempts-to-demonize-protestors-in-banja-luka-fall-flat
 16 May: https://www.washingtonpost.com/world/europe/thousands-protest-in-bosnia-over-killings-of-2-young-men/2018/05/15/9c80c3c4-5872-11e8-9889-07bcc1327f4b_story.html?utm_term=.d1e1ed2f3903